တခုထည်းသော..လွတ် မြောက် ရာလမ်း - ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺
တခုထည်းသော..လွတ် မြောက် ရာလမ်း
Posted by ukkmaung on December 30, 2013 at 9:00am
၀ိပဿနာ၊ သတိ ပဋ္ဌာန်တရားပွားများအားထုတ် ခြင်းသည် သာတခုထည်းသော..လွတ် မြောက် ရာလမ်းဖြစ် ပါတယ်။
မျက်စိ၊ နား နှာခေါင်း၊ လျာ၊ ကိုယ်၊ စိတ် တို့နဲ့လာရောက် တွေ့ထိ သမျှသော..အဆင်း၊ အသံ၊ အနံ့ ၊ အရသာ၊ အတွေ့အထိ၊ နဲ့ အတွေးအာရုံ တို့ကို တွေ့ထိ တိုင်း တွေ့ထိ တိုင်း....ထိ တွေ့ လာသမျှ အတွေ့အထိ အာရုံ တွေ ကို ကောင်းတယ်၊... ကြိုက်တယ်၊ ချစ် ခင်နှစ် သက်တယ်... မြတ် နိုးတွယ် တာစွဲလမ်းတယ်.. သံယောဇဉ်ရှိတယ် ..လို ထင် နေ ရင် လောဘစိတ် .. ဖြစ် နေ ပြီ... ဒီလောဘ စိတ် နဲ့သေရင် ... ပြိတ္တာဖြစ် မယ်။
ဒီ အဆင်း၊ အသံ၊ အနံ့ ၊ အရသာ၊ အတွေ့အထိ၊ အတွေးအာရုံ တို့ကိုထိ တွေ လိုက် တိုင်း မကောင်းဘူး၊ မကြိုက် ဘူး၊ မုန်းတယ်၊ မလိုချင် ဘူး၊ မရချင် ဘူး၊ ကြောက် တယ်၊ ဆိုတဲ စိတ် ဖြစ် နေ ရင် ဒေါသစိတ် ဖြစ် နေ ပြီ၊.... ဒီ ဒေါသစိတ် နဲ့သေရင် (ဒယ်အိုး)... ငရဲ ကို ရောက် ရမယ်။
ဒီ အဆင်း၊ အသံ၊ အနံ့ ၊ အရသာ၊ အတွေ့အထိ၊ အတွေးအာရုံ တို့ကိုထိ တွေ လိုက် တိုင်း ...ကောင်းမှန်းလည်းမသိ၊ ဆိုးမှန်းလည်းမသိ ပဲ သတိ လက် လွတ်... ( အမှတ် အသိမရှိပဲ) ဖြစ် နေ ရင် မောဟစိတ် ဖြစ် နေ ပြီ။ ဒီ မောဟစိတ် နဲ့သေရင် တိရိစ္ဆာန် ဘ၀ရောက် ရမယ်။
ဒီအဆင်း၊ အသံ၊ အနံ့ ၊ အရသာ၊ အတွေ့အထိ၊ ....အတွေးအာရုံ တို့ကို ထိ တိုင်း ထိတိုင်း သိသိ နေ ရင်....သိရုံလေးပဲသိနေရင်...လောဘလည်းမဖြစ် ဘူး၊ ဒေါသလည်းမဖြစ် ဘူး... မောဟလည်းမပေါ်တော့ ဘူး.... ထိ၊သိ ..သတိ ကလေးရှိ နေ တဲ့အတွက်...ထိနေတာကို သိမယ်... ခဏကလေးတည် နေ တာကိုသိမယ်.. ပျက် သွားတာကို သိလာမယ်. အပ်ဖျားပေါ်ကိုမုန်ညှင်းစေ့ကလေးတွေ ကျကျ လာတဲ့သဘောကို သိ လာမယ်။....ဒါဟာ ဖြစ်ပျက် ကို မြင် တာပါပဲ။ သမာဓိအားကောင်းလာတော့ အသိ ကလေးတွေ စိတ် စိတ် လာ ပြီး၊ မြန် လွန်းအားကြီးတော့ ...ပျက် ပျက် သွားတာကို ပဲ သိနေတော့ မယ်.. ခန္ဓာကိုယ် မှာစိုက်ကြည့်လိုက် ရင်လည်း။ ... နာတာ၊ ကျင် တာ၊ ၊ကိုက် တာ၊ ထုံတာ.. ယားတာ.. အေးတာပူတာ.. မခံသာတဲ့ ဒုက္ခ ဝေဒနာတွေ ကို တွေ့ လာမယ်။ သမာဓိအားကောင်းနေ တဲ့အခါ...၊ သာယာတဲ့ချမ်းသာတဲ့သုခဝေဒနာတွေ ကို တွေ့နေ မယ်။
ဒီဝေဒနာလေးတွေ က တိုးတိုးလာလိုက် .. ရော့ ရော့ သွားလိုက် နဲ့ အနိစ္စမမြဲ တာကို သိလာမယ်၊ ဘာဝေဒနာပဲ ဖြစ် ဖြစ်၊ အဖန် တလဲလဲ ဖြစ် ပျက် နေ တာကို သိနေ ရတော့ . ဒီလို မမြဲတာတွေ ဟာ...... ကိုယ် က မလိုချင် ပဲ ရရ နေ တဲ့အထွက် ဆင်းရဲနေရ တဲ့ဒုက္ခကိုသိလာမယ်..ဒီလို မမြဲတာ ဆင်းရဲ တာတွေ ကို မရအောင် လုပ် လို့မရနိုင် တဲ့အတွက်.... ငါ မဟုတ်၊ ငါ့ ဟာ မဟုတ်...ငါ ...ငါ... ငါ့ဟာတွေ မဟုတ် ဘူးဆိုတဲ့အနတ္တ ကိုသိလာမယ်။
၃၁ဘုံ မှာ အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ။ အနတ္တပဲရှိ ပါ ကလားလို့သိလာရမယ်။ ၃၁ဘုံရဲ့အပြစ် တွေ၊ ဘေးတွေ ကိုသိလာမယ်။၃၁ဘုံကလွတ် ချင် လာမယ်။ ဒီ ဝေဒနာတွေ ကို ပဲ စိုက် ရှုရင်း ရှုရင်းနဲ့....ရှု မှတ် တဲ့စိတ် နဲ့ ပစ္စုပ္ပာန်နဲ့လည်း တဲ့သွားတဲ့အချိန် မှာ ဝေဒနာတွေ အားလုံး တဒင်္ဂချုပ် သွားမယ် ပျောက် သွားမယ်၊ မဖြစ် မပျက် ရာကို ဖြတ် ကနဲ မြင် သွားသိသွားမယ်။ အဲဒီလိုသာဆိုရင် ဒီဘ၀ပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ် တွေ ရော...ဘ၀ ဘယ် က စမှန်းမသိ တဲ့ ဘ၀၊ ဘ၀ က အကုသိုလ် တွေ ရော.. အားလုံးကြေ သွားတယ်...မြတ် စွာဘုရားလက် ထက် က .... ဆရာအတင်မှားခဲ့တဲ့လူဆိုးကြီး၊ လူသတ်သမားကြီ..အင်္ဂုလိမာလကြီး ဟာ..လက် ညှိုးတထောင် ရဖို့အတွက် လူပေါင်းမြောက် များစွာကို သတ် ခဲ့တယ်။..ရှေးဘ၀။ ဘ၀ က ပါရမီ အခံက ရှိတဲ့အတွက် ... မြတ် စွာဘုရားနဲ့တွေ့ပြီး...မြတ် စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမ တရားနာပြီးတာနဲ့အမြင် မှန် ရပြီး သောတာပန် တည် တယ်... ဆက် လက် ပြီးတရားအားထုတ် တော့ ရဟန္တာကြီဖြစ် သွားးရတယ်။
ခုခေတ်မှာတော့ . တရားနာရုံသက် သက်.. တရားစာတွေ ကို ဖတ် နေ ရုံ သက် သက် နဲ့တော့ မရနိုင် ဘူး။ လက် တွေ့တရားကို ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ် မှ သာ ရနိုင် တယ်။
ဥပမာ...မကျမ္မာတဲ့ လူနာဟာ ရောဂါပျောက် ချင် လို့ဆရာဝန် သွားပြရာမှာ... ဆရာဝန် က ပေးလိုက် တဲ့ဆေးကို မသောက် ပဲ၊ ဆေးညွုန်းကို ရွတ် ဖတ်နေရင် ၊ ပူဇော် နေ ရင့်ရောဂါ မပျောက် နိုင် ဘူး... ဆေးကို လက် တွေ့ သောက် သုံးမှသာရောဂါပျောက် နိုင် သလို....ဲ တရားကို ရွတ် ဖတ် နေ ရုံနဲ့တရားနာနေ ရုံ နဲ့.. တကယ့်အနစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ ကို မတွေ့နိုင် ဘူး၊
၃၁ဘုံဘေးဆိုးကြီးက မလွတ်နိုင်ဘူး၊ ဗြဟ္မပြည် မှာတ၀င်းဝင်း၊ ၀က် စကျင်းမှာတရှုံ့ရှုံ့ဆိုတဲ့...မြတ်စွာဘုရားလက် ထက် က " ဗြဟ္မာကနေ အသက် ကုန် တော့ ၀က် မကလေးသွားဖြစ်သွား တာ" ကို မြတ် စွာဘုရားကမြင် တော့ ပြုံးတော် မူတဲ့အကြောင်း စာတွေ မှာရှိတယ်...
တရားအားထုတ် မှ မဂ်ဉာဏ် ဖိုဉာဏ်ရမှာ.... ၃၁ဘုံဘေးဆိုးကြီးကလွတ် မှာတရားအားမထုတ် ပဲ မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ် နိဗ္ဗာန် ကို မျက် မှောက်ပြုရပါလို၏လို ဆုတောင်းနေ ရုံနဲ့မရနိုင် ဘူး။...
ဒါကြောင့်ဝိပဿနာ၊ သတိ ပဋ္ဌာန်တရားပွားများအားထုတ် ခြင်းသည် သာတခုထည်းသော..လွတ် မြောက် ရာလမ်းဖြစ် ပါတယ်။
ငြိမ်း အေး ကြ ပါစေ။